I-Virgo ne-Scorpio yenza njengama-agent e-covert kwimini yokuqala. Umcimbi onobuqili apha akakho othanda ukutyhila kakhulu malunga nabo.
Bobabini banomdla wokubonakalisa isimo sengqondo sokungathathi hlangothi, abangafuni ukunikela nantoni na. Kukho ininzi yokucima ngaphambi kokuba kunikwe imvume yokukhuseleko.
I-Scorpio ngumthandi okhuni kwaye uya kufuna ukuva uVirgo ngenjongo yokwenza umdla. I-Scorpio ithumela imiyalezo ecashileyo kwaye ikhangele iindlela zokudibanisa ngokukhawuleza ukwakha uxhaso olumnandi.
Ezinye iifrigi zithe zavela emhlabeni kunye necala lokudinga.
Ukuba i-Virgo inamathele kwinkqubo okanye iqhube idibanisa idatha okanye iinkqubo zokucwangcisa, iSorpio ingasifumana indlela yokubonisa ukuhamba kwayo. Kwaye ke jonga kwezinye indawo ngenxa yobunzima abayifunayo.
I-Virgo isilumkiso ngakumbi kunothando kuneScorpio, kodwa bobabini banqwenela ukugcina iimfihlelo zabo. Ngamnye unayo i-aura yokuqulatheka, into enokuyithandana, kwaye ivuselele ingqiqo.
Bajonga omnye nomnye ngokugqithisa. Kodwa bobabini bayathanda ukuhlalutya abantu kunye neemeko, kwaye oko kwenza ukuba incoko iqhube lula. Kungekudala bafumanisa ukuba bobabini 'abangaboniyo' ababona izinto ezinzima zobomi bokubanda.
I-Virgo ethandweni ifuna ukuba imithetho yakhe ihlonishwe, kwaye ayithandayo kwaye ayithandi ngokuyijonga ngokubanzi.
I-Scorpio othandweni yinkampani yangasese kunye ne-detective of nature, ukuhlukumeza imidiya yoluntu kwidatha.
Virgo ne Scorpio in Love
Isipho sikaScorpio sokuthi izinto eziyinyaniso ezixakekileyo zinganqanda i-Virgo.
Kwaye ukuba iVirgo ijika iliso elijongene neCorpio, le nto yaziwa ukuba iqhube ingxabano kunye neembalo ezimbalwa. Bobabini banokuyidla, kodwa ayithatha kakuhle. Ukuba kwindawo ebangela ukuziphatha ngokuzikhusela. Baya kufuna ukuba bafunde nini ukunikela ukugxekwa, kwaye nini na ukukhuthaza omnye ngenkxaso.
I-Virgo iyakuncoma amandla eSorpio ukuba angene kwiinjongo zobomi omnye ngexesha. Bobabini banqwenela ukuhlala bevelisa kwaye basebenze kwiinjongo ezibonakalayo. Ngamanye amaxesha, kubonakala ngathi banokubambisana kunabathandi. Ukuthatha ixesha ukwenza izinto nje ukuzonwabisa, nangona kunzima kule miqondiso, kuyafaneleka. Bobabini badinga amathamo amaninzi ukuba baxakeke kwiinkxalabo zobomi baze bakhule ngakumbi xa kunomsebenzi owabelwana ngawo.
I-Scorpio iqinisekiswa yimfuneko yeVirgo yokwakheka kwansuku zonke, kwaye isidingo sokuzimela sisinika ixesha lika-Scorpio ukwenza into yazo, ngokunjalo. Ku-Scorpio, i-Virgo eqhelekileyo iVirgo ibonakala ngathi iyindawo yonke, ayikwazi ukufumana i-traction kwiinjongo zayo.
I-Scorpio engekho-ntsholongwane ingayisebenzisa inzuzo yeVirgo engakhuselekanga, kwaye isebenze uhlobo olumnyama lwama-psychic 'amaSorge Scorpios' awanamdla. Ekugqithiseni kwayo, unayo i-master and servant dynamics engabangela ukugqithisa kakhulu kokubili.
I-Virgo idinga ukudalulwa ngokupheleleyo kunye nokunyaniseka xa kuqinisekiswe ukuthembela kwaye oku kuthetha ukuba i-Scorpio ihamba rhoqo ngaphaya kommandla wokhuseleko. Kodwa xa iSorpio ifumene iqabane elithembekileyo le-Virgo, kunethuba lokuba ukuvuleka kuya kuba yinto evamile. Ulwalamano luveza ubunzulu obunzulu kunye ne-sex drive enkulu yeScorpio, ngoxa iVirgo ikhetha umgangatho ngaphezu kobuninzi.
Kodwa bobabini bayayixabisa ubuchule bokusebenzisa ubugcisa, ukwenza ubomi babo bobulili bubume bendawo yokukhula. Uninzi luyakwazi ukuhlanjululwa ngokusondelana. I-Scorpio kuyakufuneka ibe nomonde nge-Virgo egcinwe (ngamanye amaxesha). Kodwa iVirgo eziva ikhuselekile kwaye ikhululekile ngokumisela, ngumdlalo wamava angunaphakade. Intombi ingumqondiso wehlabathi, nangona i-sensitive, efuna indawo ehlambulukileyo.
Kukho imingeni eyakhelwe apha, kodwa ukuthambekela kokubambisana kunye nobomi kubandisa amathuba abo okuthandana.
Ngaphandle: ukubandakanya ngokupheleleyo othandweni; luleko; ezijoliswe kumsebenzi; bobabini; ukucoca (ukuhlanza) kakhulu i-cathartic; ingqiqo; ngqi niseki; umlingo osebenzayo.
Ngaphantsi: ixesha elifanelekileyo (Virgo) ngokumalunga nexesha (Scorpio); ukuzikhusela nokugxeka; unomdla (Virgo) ngokubhekiselele kwimizimba (Scorpio); iimpawu ezifihlakeleyo ezingekho (iimpawu eziwela).
I-Element kunye nomgangatho: I- Mutable Earth (Virgo) kunye namanzi angagqibekanga (Scorpio)
Indlela Yokufundisa Abantwana Ukukhawuleza Ukukhusela kunye Neziseko zeMidlalo
I-Rock Music: I-Origin and History